Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ ): Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ )
မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ ကို တစ်နေရာထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေရန် စုစည်းပေးသော နေရာလေးပါ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ့
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) - မြန်မာစာတန်းထိုး
တကယ့်ဆီဒစ်သား လို့အဓိပ္ပယ်ရတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလမှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်သမိုင်း နောက်ခံ-အက်ရှင်/ဒရမာကား ဖြစ်ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်ဒါရိုက်တာ တီရှန်ဝေ (ဝေ-တီရှန်) က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ဝူး ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ်လုပ်ပြီး ၁၉၃၀ခုနစ် ထိုင်ဝမ် အလယ်ရှိ #၀ူရှီးအရေးအခင်း အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းကားမှာတော့ အပိုင်း၂ပိုင်းပါဝင်ပြီး အပိုင်း-၁ကို The Sun Flag(နေအလံ)လို့အမည်ပေးထားပြီး
အပိုင်း(၂)ကိုတော့ Rainbow Bridge(သက်တန့်တံတား)လို့ အမည်ပေးပြီး ပြသချိန်
၄နာရီခွဲ စာလောက် ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ၆၈ကြိမ်မြောက် ဗီးနစ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပြသခဲ့ပြီး ၈၄ကြိမ်မြောက် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာ စကားပြော ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာလည်း စကာတင်
စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဆုပေါင်း ၉ဆုနဲ့ စကာတင်စာရင်းမှာ အကြိမ်၂၀ထိပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆုတွေကတော့ ၁။ (2012) Asia Pacific Screen Awards - UNESCO Award
၂။ (2012) Chinese Film Media Awards - Best Picture Award
၃။ (2012) Golden Horse Film Festival - Audience Choice Award
၄။ (2012) Golden Horse Film Festival –4Golden Horse Award
(Best Feature Film,Best Supporting Actor,
Best Original Film Score, Best Sound Effects)
၅။ (2012) Osaka Asian Film Festival - Audience Award
၆။ (2012) Shanghai Film Critics Awards – Film of Merit
တို့ဖြစ်ပါတယ်။စကာတင်စာရင်းကတော့ စာရှည်မှာစိုးလို့ ချန်လှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတွေနဲ့ အနောက်နဲ့ဥရောပအတွက် မူလရုပ်ရှင် ၂ပိုင်းကားကို ၂နာရီခွဲကြာမြင့်တဲ့ တစ်ကားတည်းပုံစံ အဖြစ် Version ပြောင်းပြီး ထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးသမိုင်း ကုန်ကျစရိတ်အမြင့်မားဆုံးအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ NT$(New Taiwan Dollar) သန်းပေါင်း ၇၀၀-၇၅၀ကုန်ကျခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ NT$ သန်းပေါင်း ၈၈၀ အမြတ်စွန်းရခဲ့တဲ့ အတွက် အရင်းကျေရုံသာသာ ရတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာတော့ ဒီဇာတ်ကားကို Mel Gibson ပါဝင်တဲ့ စကော့တလန်တော်လှန်ရေးကား Braveheart(1995) နဲ့ အမေရိကန်လူနီရိုင်းတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးကား The Last of The Mohicans နဲ့ ယှဉ်ထိုး နှိုင်းဆိုကြပါတယ်။
အချိန်မှာ….၁၈၉၅ ခုနစ်တရုတ်နိုင်ငံမှ ဂျပန်တို့အား ရှီမိုနိုဆကီ စာချုပ်ဖြင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစုကို အပ်နှင်းစဉ်ကာလ....၊ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစုအလယ်ဗဟိုရှိ ၀ူရှီးတောင်တွင်တော့ လူမျိုးစုပေါင်း ၂၀ နီးပါးမှ မိမိအမဲလိုက်မြေကိုသတ်မှတ်၍ အမဲလိုက်ပြီး အခြားလူမျိုးစု၏ အမဲလိုက်မြေပေါ်တွင် လိုက်မိပါက ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီး လူမျိုးစုစစ်ပွဲဆင်နွှဲ တတ်သောကာလ၊ ပြင်ပကမ္ဘာတွင်တော့ မိမိတို့တည်ရှိရာ ၀ူရှီးတောင်အား တရုတ်မှ ဂျပန်တို့အား အပ်နှင်းထား၍ ဂျပန်တို့မှ ၀ူရှီးတောင်ရှိ ခေါင်းဖြတ်တတ်သောလူရိုင်းမျိုး နွယ်စုတို့ကို မိမိတို့သယံဇာတထုတ်ယူရာတွင် အနှောင့်
အယှက်ပေးတတ်သော တိရစ္ဆာန်များဟု သတ်မှတ်ထား စဉ်။ ထိုလူမျိုးစုများထဲမှ မဟီဘူရွာလေးရှိ ဆီဒစ်လူမျိုးများ ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကြီးမြတ်သော ဘိုးဘေးတို့မှ ဆင်းသက်လာသူ၊ ယောက်ျားဆိုလျှင် ရန်သူအားရဲဝံ့စွာ ခေါင်းဖြတ်နိုင်ပါမှ မိမိသေလျှင် သက်တန့်တံတားပေါ်
လာပြီး ဘိုးဘေးများက မိမိမျက်နှာတွင်ရန်သူ၏သွေးစွန်း ထင်းသည်ကို မြင်မှ ဆီဒစ်သားအစစ်ဟု သတ်မှတ်ြ့ပီး သက်တန့်တံတားမှ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်ဟု ယုံကြည်သူ၊ မိန်းကလေးဆိုလျှင် အပ်ပေါက်ရာနှင့် ကြမ်းတမ်းသော လက်ဝါးကို မြင်မှ မိမိလင်ယောက်ျား၊သားသမီးအပေါ်
တာဝန်ကျေသော ဆီဒစ်သူဟုသတ်မှတ်ပြီး ဖြတ်သန်း ခွင့်ပြုမည်ဟု ယုံကြည်သူများ။ ထိုသို့ သက်တန့်နှင့်
ဘိုးဘေးကို ယုံကြည်သည့် မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်သေးသော လူတို့နှင့် နေမှဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်သော ကမ္ဘာတခြမ်းအုပ်စိုးထားသည့် အင်အားကြီးဂျပန်နိုင်ငံတို့ တွေ့ကြရာဝယ်…..။
သမိုင်းအချက်အလက်များနဲ့ပြည့်နှက်ပြီး တောင်ကြီးတလုံးပေါ်မှ လူရိုင်းမျိုးနွယ်စု၏ ခံယူချက်၊
ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အပိုင်း-၁ရော ၂ ပါ တခါတည်းဆောင်ပြီး ကြည့်သင့်တဲ့ ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်တစ်ခေတ်လောက် အင်အားကြီးသူတို့ရဲ့ ဖိနှိပ်မှု၊ ရက်စက်မှု၊ သူ့လူကိုယ်ဘက်သား သပ်လျှိုသွေးခွဲမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်လာချိန်မှာ မခံရပ်နိုင်တော့သည့်အဆုံး
သေရမယ်မှန်းသိရက်နဲ့၊ မမျှတမှန်းသိရက်နဲ့ ကျောက်တောင်ကို ဆီးစေ့နဲ့ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်စစ်သားနှင့်ရဲ ၃၀၀၀ နဲ့ ဆီဒစ်သား ၃၀၀ တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲဟာ ကျနော်တို့လို ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဘ၀ ကျရောက်ဖူးသူတွေအတွက် ရင်နာစရာ၊ကြေကွဲစရာအတိပါပဲ။
တခါ တခါ ဒီထိုင်ဝမ်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဆီဒစ်သားတွေကိုမမြင်မိပဲ တချိန်က နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ဘိုးဘေး တွေကို မြင်ယောင်လာတဲ့အထိ
ဆွဲဆောင်လွန်းပါတယ်။ မကောင်းပြောစရာဆိုလို့လည်း အပိုင်း-၁မှာ မမြင်မိပဲ၊ အပိုင်း-၂ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာတော့ အချို့သော ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ တွေမှာ ဇာတ်ကောင်တွေကို သတ်တာ အရမ်းမြန်နေသလို ခံစားမိတာကလွဲလို့ (ကျနော်စိတ်ထဲမသေစေချင်တာလည်း ပါမှာပေါ့လေ) rating အဖြစ် IMDB 7.5၊ Rottentomatoes
77%နဲ့ Metacritics 65% ရထားတဲ့ #Seediq_Bale (#ဆီဒစ်သား) ကို အကောင်းလွန်ပြီး အလွန်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါလို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။
ဇာတ်ကားကို နှစ်ပိုင်းလုံးကို တင်ပေးထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှ့န်း - #AMBB - M-MDB
အပိုင်း ၁ - The Sun Flag(နေအလံ) Download & Watch From Pcloud
အပိုင်း ၂ - Rainbow Bridge(သက်တန့်တံတား)
Download & Watch From Pcloud Posted by
Blog ပေါ်မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
UC Browser ဖြင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Doctor Korea Drama Series
Penny Dreadful Series
Uncontrollably Fond Series
A DELICIOUS FIGHT 2015 18+ - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားလေး ကို ပြန်ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ့် movie review ကို တော့ english လိုသာ ဖတ်လိုက်ကြပါဗျာ့ Overview Hong Kong (?) Will begin fli...
Wild Card (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
နံမည်ကြီး Las Vagas မြို့ လောင်းကစားလောကမှာ ကျင်လည်နေထိုင်သူ နခ် ( Nick Wild) လောလောဆယ် မှာတော့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ချမ်းသာလ...
Malena (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး (18++)
Malena (2000) IMDb Rating (7.5/10) Rating - R ၁၉၄၁ ခုနှစ်က စစ္စလီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်သား ကောင်လေးတစ်ယောက် စွဲလမ်းခဲ့...
Harassed byastalker (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Harassed byastalker (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး ================================================= လူတွေကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်..ကမ...
Doctor Strange (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ယခုလက်ရှိ ရုံတင်နေဆဲ ဒေါက်တာစထရိန်းကို cam version နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ cam version ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကွာလတီအကောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊...
1 - Nenokkadine (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ နာမည်ကျော်အဆိုတော် (Rock Star) တယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေအသက်ခံရတဲ့အတွက် စိတ်ဝေဒနာရှိနေပြီး မိဘများအတွက် လက်စာ...
Midnight Special (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းအဖွင့်ကတည်းက သောက်ရမ်းလန်းပါတယ်။ sci-fi thriller ဆိုတာ ခဏလေးအတွင်းမှာဘဲ လုံလုံလောက်လောက် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဇာတ်လမ်း အသိမ်းပိ...
To Steal From A Thief (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး To Steal From A Thief (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး သူခိုးလက်မှ သူဝှက်လုဆိုတဲ့အတိုင်း ဘဏ်မှ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကို လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်း...
Madaari (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
2016 ရဲ့ IMDB rating များများရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားတကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘောလီးဝုဒ် အကျော်အမော် အာဖန်ခမ်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည...
Exodus: Gods and Kings (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဘီစီ ၁၃၀၀ က တော်ဝင် မိသားစုဝင်စစ်သူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မိုးဇက်ဟာ ဟစ်တိုက်စ်စစ် တပ်ကို မင်းသားရမ်မက်ဇက်နဲ့ အတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။...
Please Like & Share FB Page
Iphone အသုံးပြု သူများဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် နည်းလမ်း
Download & Watch On Blog တွင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်နည်း
Close Range (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Baby (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Cellular (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ki & Ka (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Fundamentals of Caring (2016) - မြန်မာစာတန်းထိ...
One Night Stand (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dark Shadows (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Saala Khadoos (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Doctors Korea Drama (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Silent Hill (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Wild Life (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
3D Sex And Zen: Extreme Ecstasy (2011) မြန်မာစာတန်...
The Shawshank Redemption (1994) (မြန်မာစာတန်းထိုး)...
TE3N (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
My Little Bride (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Uncontrollably Fond (2016) Korea Drama Series - မြ...
Carol (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Keeping Mum (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
The 33D Invader(2011) 21+ - မြန်မာစာတန်းထိုး
Jarhead 3: The Siege (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Badlapur (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Cabin Fever(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dirty Lies (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
A Chinese Fairy Tale (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sniper Ghost Shooter (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Insurgent (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Matrix 1,2,3 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Central Intelligence (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Departed (2006) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Zhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal (2015) - ...
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) - မြန်...
High Way Star (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
1920: London (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dead Rising:EndGame (2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
Dead Rising:Watch Tower(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sultan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုးး
HeroPanti (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pitbull:New Orders (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Independents Day (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tarzan (1999) မြန်မာစာတန်းထိုး
Triple9(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Final Destination4(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Angels & Demons (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Da Vinci Code(2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batman :The Killing Joke(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Eragon (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Legend Of Tarzan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
National Treasure: Book of Secrets (2007) မြန်မာစာ...
National Treasure (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Devil In Me (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Angry Birds (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Confession of Murder (2012) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Maigret Set A Trap(2016)(မြန်မာစာတန်းထိုး)
The Body (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mafiya: Igra na vyzhivanie (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး...
Erotic Ghost Story (1987) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
The Attacks of 26/11 (2013) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Misconduct (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Om Shanti Om (2007)မြန်မာစာတန်းထိုး
The Suspect (2013) - မြန်မာစာတန်ထိုး
Beasts of No Nation (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Last King (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး